Fiqi “Hadalkii Sh. Nuur Baaruud wuxuu ahaa hanjabaado toos ah oo halis galin kara nolosha Xildhibaanadda. – Hornafrik Media Network
“Hadalkii Sh. Nuur Baaruud habeen dhoweyd uu ka yiri akadeemiyadda Booliska ee isugu jiray kicinta, goodinta, nacaybka, Abuuridda Xaalad aan jirin kuna wajahnaa xildhibaanada labada gole ee dawladda Federaalka ah, wuxuu ahaa hadal gef ku ah barlamaanka, dastuurka dalka isla markaana halis galinaya xasiloonida siyaasadeed ee dalka iyo tan xildhibaanada”ayuu yiri Axmed Macalin Fiqi.
Xildhibaanka ayaa sidoo kale yiri “Waxaa wax laga xumaado ah in madaxda sare ee dalku ay goobta waxaasi ka dhacayeen fadhiyeen, ayagoon wax fal celin ah aan ka samayn hadalkaasi Hanjabaadda ah. Wuxuuna sheegay in hadalka Sheekha uusan aheyn mid ku qotoma arrin jirta, isla markaana uu ahaa mala-awaal iyo buun buunin been ah oo ay abuureen kooxo dowladnimada diidan.
“Barlamaanka Dowladda Federaalka waa mid ka mid ah hey’adaha saddexda ah ee dawladda waana saldhigga dawladnimada, cidda hey’adaha dawladda midna soo dhoweysata midna diida waa cid ka soo horjeeda dawladnimada, waana kuwo maslaxadooda gaarka ah doonaya in ay fushadaan”ayuu yiri Xildhibaan Fiqi.
Sidoo kale Xildhibaanka ayaa sheegay in Madaxweynaha Jamhuuriyadda uu yahay ilaaliyaha Dastuurka qaranka, isagoo ugu baaqay in gefkaas uu jawaab waafi ah ka bixiyo, hadda kadibna uusan marqaati ka noqon meel loogu gefayo hey’addaha dowladnimada ku taagan tahay, sida Baarlamaanka.
Fiqhi waxa uu sidoo kale ugu baaqay Sh Nuur Baaruud laf ahaantiisa inuu hadalkan aan munaasibka aheyn ee ka dhacay uu ka noqdo, kana cudur-daarto.
Sheekh Nuur Baaruud Gurxan oo ka hadlayay munaasabad ka dhacday Xarunta Gen. Kaahiya ayaa sheegay in cidii mooshin wada meelaha ay joogaan uga galayaan, isla markaana ayaga iyo shacabka ay wada jir u garaacayaan.